I-SPC FLOORING / PVC VINYL FLOORING / PVC IPLANGI IPLANG abahlinzeki neFektri - China SPC FLOORING / PVC VINYL FLOORING / PVC IPLANGI IPLANGI Abakhiqizi
Inkampani yakwaJiahao icele ngokuqinile ukuklama, ukukhiqiza, ukuhlola kuyo yonke inqubo yemikhiqizo yokukhiqiza nokubeka yonke inqubo ngaphansi kohlelo lokulawula ikhwalithi. Inkampani kaJiahao izama ukuba ibhizinisi lamazwe omhlaba embonini ye-extrusion.
Umugqa Wokushintshwa Kwe-PVC Ishidi Elingabonakali
Ishidi eliqinile le-PC / Umugqa Wokungena Kweshidi Elingenalutho –...
Isitezi sokukhiya se-SPC sakhiwa ungqimba oluqinile lokugqoka, ungqimba lwe-UV, ungqimba wefilimu yokuthungwa kombala, kanye nongqimba wezinto eziyisisekelo. Amazwe aseYurophu nawaseMelika abiza lolu hlobo lwesitezi i-RVP (ipulangwe eliqinile le-vinyl), iphansi leplastiki eliqinile. Okokusebenza okuyisisekelo ibhodi elihlanganisiwe elenziwe ngophawuda wamatshe nempahla ye-polymer ye-thermoplastic ngemuva kokuxakaniseka ngokulinganayo bese kukhishwa ekushiseni okuphezulu. Ngasikhathi sinye, inezici nezici zokhuni noplastiki ukuqinisekisa amandla ...
Iphansi lendabuko le-LVT linenqubo yokukhiqiza eyinkimbinkimbi, ukusetshenziswa kwamandla okuphezulu, isikhathi eside somsebenzi, futhi akulungele ukuvikelwa kwemvelo.
Inkampani yethu isungule umugqa omusha osebenza kahle we-extrusion osuselwa kubuchwepheshe bamuva be-vinyl floor extrusion, obungabona ukuqedwa kwesendlalelo se-base ne-inthanethi enamathele ngombala wefilimu nokugqoka ungqimba, konke kusetshenzwa ngesikhathi esisodwa. I-LVT yethuUmugqa Wokukhiqiza Waphansi inokukhipha okuphezulu, inqubo elula yokukhiqiza kanye ne-automation ephezulu.
Ubukhulu ububanzi: 1-2.5mm
Ububanzi ububanzi （ngaphambi Slitting）: 600-1300mm
Amandla wokukhipha: 400kg / hr, 700kg / hr, 1500kg / hr